Nyeinlatt.com: (Updated) iPhone ပေါ်မှာ Zawgyi မြန်မာ Font နှင့် Zawgyi မြန်မာ Keyboard တို့ကို အသုံးပြုနည်း
iPhone ပေါ်မှာ မြန်မာစာ ဖတ်ဖို့၊ မြန်မာစာ ရိုက်ဖို့ အတွက် မြန်မာ Font နဲ့ မြန်မာ Keyboard တို့ကို iPhone ထဲမှာ Install လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ မြန်မာ Font နဲ့ မြန်မာ Keyboard တို့ကို Install မလုပ်ခင် iPhone ကို Jailbreak အရင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ iPhone version iOS 4.3.x, iOS 5.0.x နဲ့ iOS 6.0.x တို့အတွက် မြန်မာ Font နဲ့ မြန်မာစာ keyboard ထည့်နည်းတွေကို အဆင့်ဆင့် ပြောပြပေးသွာမှာပါ။
( iOS version 4.3.x, 5.0.x နဲ့ 6.0.x တို့အတွက်)
iOS 5.0.x နဲ့ 6.0.x version တို့အတွက်
Cydia > Manage > Sources > cydia.macforus.com ကိုနိုပ်ပါ။ ပေါ်လာသော list ထဲမှ iOS 5.0.x အတွက် MMKeyboard (Zawgyi Keyboard for iOS-5) ကိုရွေးပါ။ iOS 6.0.x အတွက် MMKeyboard (Zawgyi Keyboard for iOS-6) ကိုရွေးပါ။ Install ကို နိုပ်ပါ။ Confirm ကို နိုပ်ပါ။ ပြီးရင် Restart SpringBoard ကိုနိုပ်ပါ။
For iOS 5.0.x နဲ့ 6.0.x
ကိုးကား ။ ။ ကိုစေတန် နဲ့ ကိုမိုးစက်
Posted by Nyein Latt at 7:31 PM
phyo October 24, 2011 at 12:44 AM
really thanks. thanksalot . many many thanks par byar . nout lal yay par own naw
yuyu December 10, 2011 at 12:13 AM
hi, ios5ko bal lo jailbreak lote ya ma lal???
Nyein Latt December 10, 2011 at 7:59 PM
iPhone iOS5နဲ့ iOS 5.0.1 တုို့အတွက် jailbreak လုပ်နည်းတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် jailbreak လုပ်ဖုို့ ပြုလုပ်ရမယ့် အဆင့်တွေကများတော့ ခက်ခဲနေမယ်ထင်လုို့ မရေးဖြစ်တာပါ။ အခု ကျနော့ရဲ့ iPhone ကုို Redsnow နဲ့ jailbreak လုပ်ထားပါတယ်။ အချိန်ရရင်တော့ post တင်ပေးပါ့မယ်။
Co2zeиith February 24, 2012 at 5:59 PM
ဘာမှကို နားမလည်လို့ ကလိချင်လို့ပါ
ထောင်မဖောက်ပဲ အဲ့လိုတွေ ဘာလို့လုပ်မရတာလည်းဆိုတာလေးပါ ရှင်းပြပေးပါနော်
Nyein Latt February 25, 2012 at 12:01 AM
iPhone iOS5နဲ့ iOS 5.0.1 တုို့အတွက် jailbreak လုပ်နည်းတွေကို ကျနော့် blog စာမျက်နှာမှာ တင်ထားပေးပြီးပါပြီ။ ထောင်မဖောက်ပဲနဲ့ ဘာလို့ လုပ်မရတာလည်းဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ Apple က သူထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ iDevices တွေအပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ App Store ထဲရှိတဲ့ applications တွေကလွဲလို့ တခြားအပြင်က applications တွေကို အသုံးပြုခွင့်ပေးမထားပါဘူး။ ဒါကြောင့် Apple ကခွင့်ပြုမထားတဲ့ / Apple Store မှာမရှိတဲ့ Applications, Games နဲ့ တခြား software တွေကို ကျနော်တို့ အသုံးပြုချင်လို့ Jailbreak ဆိုပြီး ထောင်ဖောက်နေရတာပါ။
Co2zeиith February 25, 2012 at 7:16 AM
အခုလိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ပြန်ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးပါဗျ၊၊
ကျနော် မနေ့ က အပျှော်လွန်ပီး အကို့ပိုစ်အဟောင်းတွေ လိုက်မရှာမိပဲ ခုလို အလောတကြီးတောင်းမိတာ တောင်းပန်ပါတရ်ဗျာ
ကျနော် အကို့ ပိုစ်တွေ သေချာလိုက်ဖတ်လိုက်ပါ့မရ်ဗျာ
နည်းပညာတွေ ဒီထက်မက အကို မျှဝေနိုင်ပါစေဗျာ
ကိုချစ် February 26, 2012 at 1:22 AM
ကျနော်သုံးနေတာက 4S ပါ ခင်ဗျာ
ကျနော် သချင်တာကို တစ်ချက်လောက် ပုံနဲ. တကွ ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်..
ဖြစ်နိုင်ရင် iphone 4s မှာ MMfont ဘယ်လိုထဲလဲဆိုတာ သေချာ ထပ်ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်..
ဒီမှာ ရှင်းပြလို. အဆင်မပြေရင် ကျနော့် Gmail လိပ်စာ ကို.ပို.ပေးပါ...
Nyein Latt February 27, 2012 at 12:44 AM
ကိုချစ် သုံးနေတဲ့ 4S က iOS 5.0 ဒါမှမဟုတ် iOS 5.0.1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ iOS 5.0 နဲ့ 5.0.1 တို့အတွက် မြန်မာဖောင့် နဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် ထည့်နည်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိအောင် ကျနော် ဒီ Post လေးကိုပြန်ပြင်ရေးပြီး ပုံနှင်တကွ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာဖောင့် နဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် ထည့်နည်းကိုမပြုလုပ်ခင် ကိုချစ်ရဲ့ iPhone 4S ကို အရင် jailbreak လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ iPhone 4S အတွက် jailbreak လုပ်နည်းကိုလည်း ကျနော်ရဲ့ blog စာမျက်နှာမှာ Post တင်ထားပေးပြီးပါပြီ။
NOKAI N9 ရော မြန်မာဖောင့် ထည့်လို့ရလားအကို သိရင်ကူညီပါနော်
Pyae Phyo (MMiTD) April 6, 2012 at 2:37 PM
Nyein Latt April 26, 2012 at 7:35 PM
It is ok. Thanks for sharing my post.
nmw April 25, 2012 at 2:17 PM
ios တွေမှာ Jailbreake မလုပ်ပဲ Zawgyi fonts ကို ထည့်လို့ရသလားသိချင်ပါတယ်။
Nyein Latt April 26, 2012 at 1:12 AM
iOS ပေါ်မှာ jailbreak မလုပ်ပဲ Zawgyi font ထည့်လို့မရပါဘူး။ တခုတော့ရှိပါတယ် jailbreak မလုပ်ပဲ မြန်မာစာတွေကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် safari အစား Mogok web browser ကို install လုပ်ပြီးသုံးကြည့်ပါ။ မြန်မာ ကီးဘုတ်ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ MMKeyboard lite ကို install လုပ်ပြီးသုံးပါ။
whitney April 26, 2012 at 4:16 AM
I juz wanna know.. If I put the restart springboard button, is the iPod power off? I'm afraid abt my iPod touch switch off again.... :). Plz reply me...
Nyein Latt April 26, 2012 at 11:49 PM
It is depend on applications. Some applications need to restart iPod after put "restart springboard". But no problem. After iPod power "off", it will automatically "on" again. Does your iPod has anything problem to switch off?
whitney April 27, 2012 at 1:23 AM
Well.... The problem is my iOS version 5.1 which I can't switch off.... I've already jailbreak my iPod but still cannot switch off... So r there any way that I can install zawgyi keyboard without having to switch off? .
Nyein Latt July 22, 2012 at 11:51 PM
It is no problem for Myanmar font and keyboard.You can install without having to switch off.
kothi ha August 30, 2013 at 10:30 PM
အကိုရေ IOS 6.1.3 မှာထောင်ဖောက်ပြီးရင် ပါဝါပိတ်လို့မရဘူးဆို။
ကျွန်ပါဝါပိတ်မိတာ Cydia ထဲဝင်လိုမရတော့ဘူး မြန်မာကီးဘုတ်မရှိတော့ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ Cydia ကိုဝင်လို့ရအောင် ပြီးတော့ မြန်မာကီးဘုတ်ပြန်ရအောင်လို့ကူညီပါအုံး
Naing Naing-Kalaw ( Trekking And Biking ) January 29, 2016 at 3:42 PM
အားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်
ဒီဖောင့်ကို ရဖို့အတွက် ၂ ရက် အချိန်ကြာခဲ့ပါတယ်
Jailbreak လုပ်ပြီးရင် Cydia ထဲမှာ Source ကနေ ADD လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ
ကို add ပါ . ပြီးရင် zawgyi font & zawgyi Keyboar install ဆက်လုပ်ပါ .
အားလုံး Good Luck :)